News Collection: 'टार्गेट’ नेपाल
पाकिस्तानी दूताबासका कर्मचारी मेहबुबमाथि भएको आक्रमणको बदलामा प्रत्याक्रमण गर्न खोजेको आरोप
"भारतीय दूताबासका कमचारीमाथि आक्रमण गर्न कुनै आपराधिक टोली नेपालतर्फ रमाना भइसकेको छ," वैशाख महिनाको तेस्रो साता नेपाली सुरक्षा निकायहरूमा यस्तै सनसनीपूर्ण सूचना आयो। त्यसको केही दिनपछि नै १ जेठ २०६८ मा भारतीय कूटनीतिज्ञमाथि आक्रमण गर्न पाकिस्तानको कुनै समूहद्वारा खटिएको आरोपमा वीरगन्जमा भारतीय नागरकि साजिद अलि अन्सारी पक्राउ परे। तर, उनीमाथि लगाइएको औपचारकि आरोप भने नक्कली भारतीय रुपियाँको कारोबार थियो। टोली नै रमाना भइसकेको सूचना आएपछि कसरी र कहाँबाट त्यस्तो टोली नेपाल छिर्छ भन्ने खोजीमा सबै सुरक्षा निकाय परचिालित थिए। पाकिस्तानी दूताबासको भिसा शाखाका कर्मचारी मेहबुब आसिफमाथि १ वैशाख ०६८ मा भएको हत्या प्रयासको ठीक एक महिनापछि भारतीय कूटनीतिज्ञमाथिको आक्रमणका लागि खटिएको अभियोगमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिआतंकवाद एकाइको एउटा विशेष टोलीले साजिदलाई पक्राउ गरेको हो।
सम्भावित खतराको सूचना संकलन गर्ने क्रममा साजिदको मोबाइलमा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र पाकिस्तानको जासुसी संस्था इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेन्स -आईएसआई)सँग निकट रहेको आरोप लाग्दै आएका व्यक्तिहरूसँगको नियमित सम्पर्क देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको वीरगन्ज प्रहरी स्रोतले बताएको छ। तर, गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार साजिदलाई भारतीय सूचना र अनुरोधका आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। आफ्नै प्रयासमा भारतले सीमावर्ती इलाकाहरूमा गरेको टेलिफोन टेपिङ्का आधारमा साजिदलाई पक्राउ गरििदन भारतीय राजदूताबासले आग्रह गरेको थियो।
कुनै सफी भन्ने पाकिस्तानी नागरकिले साजिदलाई आक्रमणका लागि सुर्‍याएको भारतीय पक्षले प्रहरीसमक्ष दाबी गरेको छ। वीरगन्ज प्रहरी स्रोतका अनुसार विहारका सांसद साहबुद्दिनसँग निकट रहेका मुन्ना खान भनिने इलताव हुसैन अन्सारीसँगको समन्वयमा रहेर साजिदले काम गर्ने गरेको सूचना भारतीय पक्षले दिएको छ। साजिद हाल वीरगन्जमै थुनामा छन्। उनको 'टार्गेट' को थियो ? उनको टोलीका सुटरहरू को-को हुन् ? जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ प्रहरीसँग पनि छैन। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, "पक्राउ गरिएको छ र हामी उनका गतिविधि अनुसन्धानका क्रममा छौँ।"
पाकिस्तानी कूटनीतिक कर्मचारी मेहबुबमाथि गोली प्रहार हुनेबित्तिकै नेपाल प्रहरीले 'भारतीय मूलका जस्ता लाग्ने दुई जनाले गोली प्रहार गरेको' धारणा सार्वजनिक गरेको थियो तर केहीबेरपछि नै त्यसलाई सच्यायो। उता पाकिस्तानी दूताबासले आक्रमणकै दिन परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने पत्ता लगाई कारबाही गर्न पत्राचार गर्‍यो -हेर्नूस्, पत्रको प्रतिलिपि)। तर, अनुसन्धानमा भने प्रहरीलाई उल्लेख्य सूचनाको सहयोग गर्न सकेन। घाइते मेहबुबले प्रहरीद्वारा बनाइएको आक्रमणकारीको स्केच हेर्दै ठ्याक्कै मिलेको भने पनि थप केही बताएनन्। अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार दूताबासका एक जना प्रथम सचिवसँग प्रहरीले शंका लागेका वा धम्की दिने व्यक्तिहरूबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको थियो तर त्यहाँबाट पनि कुनै सूचना आएन।
उता त्यस आक्रमणमा केही शंकास्पद भारतीय टेलिफोन नम्बरहरूबारे जानकारी माग गर्दै प्रहरीले भारत सरकारलाई पत्र लेखेको छ तर जवाफ पाएको छैन। भारतबाट केही जानकारी आए/नआएकोबारे पाकिस्तानी दूताबासका तर्फबाट पटकपटक चासो राखिएका कारण प्रहरीले 'काउन्टर' आक्रमणको खतराबारे विश्लेषण गर्दै आएको थियो। किनभने, यसअघि धेरैपल्ट भारत र पाकिस्तानका भूमिगत आपराधिक समूहहरू छोटा राजन समूह र दाउद इब्राहिम समूहका बीच मारामारका घटना-प्रतिघटनाहरू भएका छन्। दुवै मुलुकले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेका कारण विगतका घटनामा संलग्नहरूबारे नेपाली प्रहरी अन्योलमा परेको थियो भने प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारीहरू कारबाहीको भागीदार भइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार पाकिस्तानी गुप्तचर निकाय आईएसआईले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई नेपालमै आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको दाबी गर्दै भारतीय पक्षबाट बारम्बार सूचनाहरू आइरहेका थिए। त्यसयता केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा निकायहरूलाई सम्भावित क्षेत्रहरूमा निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको थियो। यसै क्रममा झापाको काँकडभिट्टामा शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थसहित एक भारतीय सिपाही पनि पक्राउ परे।
साजिद र पाकिस्तान कनेक्सन
साजिद भारतको विहार राज्यको पूर्वी चम्पारण जिल्ला लक्ष्मीपुर-४ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनी वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको रक्सौलको ब्लक पञ्चायत समितिको यसपटकको चुनावमा उम्मेदवार थिए तर पराजित भए। वीरगन्ज आवतजावत गररिहने उनी त्यहाँको पमपम भवन, माईस्थानमा रहेको पोलो टेलरमा दर्जीका रूपमा पनि कार्यरत थिए। करबि तीन वर्षअघि झन्डै आठ लाख नक्कली भारु नोटसहित साजिद वीरगन्जबाटै पक्राउ परेका थिए। २१ महिना लामो जेल सजाय भोगेर ०६७ भदौमा रहिा भएका उनी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल विषय पढ्नका लागि पाकिस्तान पठाउने र प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख रुपियाँसम्म कमिसन लिने कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। यसपटक पक्राउ गर्दा प्रहरी टोलीले जाली नोटको कारोबारका लागि उनीसँग भेटघाट गर्न चाहेको बहाना बनाएको थियो। स्रोतका अनुसार त्यसबेला उनले एक सयको भारु नोट बराबर ३० रुपियाँ मिलाउन सक्ने बताएका थिए।
विवरण नखुलेको प्रमोद भन्ने व्यक्तिमार्फत साजिदको पाकिस्तानी नागरकि सफीसँग काठमाडौँमै परचिय भएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार सफी पाकिस्तानबाट नेपाल आई छद्मभेषमा नक्कली भारु नोटको कारोबारमा संलग्न व्यक्ति हुन्। सफीले नै उनलाई पाकिस्तानी दूताबासमा कार्यरत एक कर्मचारीसँग सम्पर्क गराइदिएका थिए। गत भदौमा जेलमुक्त भएपछि फेर िसाजिदको सम्पर्क सफीसँग रहेको देखिएको छ। पाकिस्तानी दूताबासका कर्मचारीसँगको सम्पर्क सूत्र भएकाले सफीसँगको पटकपटकको सम्पर्क पाकिस्तानी दूताबाससँग पछिल्ला दिनहरूमा समेत जोडिएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। उनका चारवटा टेलिफोन नम्बरहरू चालू रहेकाले पनि कुन नम्बरबाट दूताबास 'कनेक्सन' हुने गथ्र्यो भन्ने खोजी भइरहेको छ। केही टेलिफोन नम्बरहरूमार्फत पाकिस्तानमा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रहरीको प्रयासमा भारतीय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँगको उनको सम्पर्कले असजिलो बनाइदिएको छ। त्यसैले भारतीय कूटनीतिज्ञमाथि आक्रमणको योजना बनाइरहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाएर एक महिनादेखि थुनामा राख्दै आएको छ।
एउटा छुटाउने, अर्को थुनाउने पक्षमा
साजिद पक्राउ परेपछि उनलाई छोड्ने कि हत्याको अभियोग लगाएर मुद्दा चलाउन कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास गर्ने भन्नेबारे भारतीय पक्षहरूबीच नै मत बाझिएको छ। नेपाल प्रहरीको उच्च अधिकारीहरूसँग भारतीय सैनिक जासुस विभागका अधिकारीहरूले साजिदलाई आफूहरूले प्रयोग गर्दै आएकाले थुनामुक्त गरििदन आग्रह गरेका छन्। तर, भारतीय दूताबासले भने त्यसविपरीतको पत्र पठाएको छ। उसले नेपाल प्रहरीका वीरगन्जस्थित डीएसपी योगबहादुर पालको नाम उल्लेख गर्दै साजिदलाई मुक्त गर्न लागिएकामा आपत्ति जनाएको छ। वीरगन्जस्थित महावाणिज्यदूत कार्यालयको रपिोर्टको हवाला दिँदै दूताबासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको त्यस पत्रमा साजिदलाई कूटनीतिज्ञमाथि आक्रमण गर्न परचिालित नभने पनि उनलाई नक्कली नोटको कारोबारी भन्दै थुनामुक्त नगर्न आग्रह गरेको छ। परराष्ट्रको शिष्टाचार महापाल विभागलाई सम्बोधन गरी गृहसचिव लीलामणि पौडेललाई बोधार्थ दिइएको १३ जेठको त्यस पत्रमा भारतीय जाली नोटको कारोबार बढेकामा चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। र, जाली नोटको कारोबारका सम्बन्धमा आवश्यक सजगता अपनाउन र गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ।
एकातिर सैनिक र अर्कातिर दूताबासको पत्रका बीचमा नेपाल प्रहरीले भने निर्णय लिन सकिरहेको छैन। यसपल्ट पक्राउ पर्दा साजिदका साथमा जाली नोट थिएनन्। विगतमा कुनै पनि साना घटनामा जोडिएका व्यक्तिलाई समेत नेपालमा पक्राउ गरी सटुक्क भारततिर लगिएका घटनाहरू भए पनि भारतीय नागरकि साजिदलाई सुपुर्दगी गर्न भारतीय पक्षले माग गरेको छैन। वीरगन्जस्थित प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, "भारतीय प्रहरीले चाहेको भए साजिदलाई सीमा क्षेत्रमा सजिलै पक्राउ गर्न सक्थ्यो, हामीले नै पक्राउ गरे पनि हल्ला नहुँदै सीमा कटाउन दबाब दिन सक्थ्यो तर यस्ता केही भएनन्।"
दाउद इब्राहिम एकातिर र छोटा राजन भन्ने राजेन्द्र सदाशिव निखल्जे एवं बब्लु श्रीवास्तवलाई अर्कातिर राखेर नेपालका सुरक्षा निकायले यहाँ हुने अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। छोटा राजन समूहले प्रहार गरेको भए दाउद एवं आईएसआईसम्बद्ध भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैगरी दाउद समूहले प्रहार गरे राजन वा बब्लु एवं भारतीय गुप्तचर संस्थाका एजेन्टको संज्ञा दिइएका धेरै घटनाहरू छन्। आणविक अस्त्रले सुसज्जित छिमेकी मुलुकहरू भारत र पाकिस्तानबीचको दुस्मनीमा नेपाली भूमि अचानो बनेका उदाहरण हुन् ती घटनाहरू, जुन कारण नेपालको आन्तरकि सुरक्षासमेत प्रभावित भएको छ। साजिद प्रकरण पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हो कि ?
मुक्त भए भारतीय सिपाही
पाकिस्तानी दूताबासमा कार्यरत मेहबुब आसिफमाथि भएको आक्रमणको घटनाको २२औँ दिनमा एक भारतीय सुरक्षाकर्मीसहित केही व्यक्ति पूर्वी नेपालको सीमा क्षेत्रमा अचानक पक्राउ परे। नेपाल-भारत सीमामा पर्ने काँकडभिट्टा सहरमा समातिएका ती भारतीय सुरक्षाकर्मीका साथमा शक्तिशाली विस्फोटकसमेत भेटियो। पक्राउ परेको केही क्षणमा उनीसँग रहेको विस्फोटकलाई नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको थियो भने पक्राउ परेका अभियुक्तहरू पनि केही घन्टामै मुक्त भए।
काँकडभिट्टाबाट जनकपुर जाने मे१ख ९०५ नम्बरको बसमा विस्फोटकसहित भारतीय सीमा सुरक्षा बल -एसएसबी)का जवान मुकेशकुमार राय पक्राउ परेका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले सुराकीका आधारमा पक्राउ गर्दा रायले बोकेको झोलामा प्लास्िटकभित्र तारहरूले बेरेको तयारी अवस्थाको पाइपबम फेला परेको थियो। उनीसँगैको टोलीमा भारत विहार पिपराका दिनेश चौधरी, ओखलढुंगाका शंकर क्षेत्री र झापा, अनारमनिका श्याम राई पनि पक्राउ परेका थिए। गुड्न तयार भएको बसमा विस्फोटक पदार्थ फेला परेपछि सशस्त्र प्रहरीले अभियुक्तहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, काँकडभिट्टामा बुझाएको थियो।
यो खबर पाउनासाथ काठमाडौँस्थित भारतीय दूताबासका अधिकारीहरूले तत्कालीन गृहसचिव गोविन्द कुसुम र उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई बेवारसिे बम छुट्टी मनाउन गएका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फसाउन पक्राउ गरेको दाबी गर्दै उनलाई तत्काल मुक्त गर्न भनेका थिए। त्यसपछि दुवै भारतीय नागरकि त्यसै रात मुक्त गरिए भने दुई नेपालीमध्ये झापाका श्याम राईलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।
घटना जो नेपालमा भए
आईसी ८१४को अपहरण : आतंकवादी संगठन लस्कर ए तोयबाद्वारा ९ पुस ०५६ मा काठमाडौँबाट नयाँदिल्लीका लागि उडेको भारतीय विमान सेवा इन्डियन एयरलाइन्सको उडान नम्बर आईसी ८१४ जहाजको अपहरण। भारतीय पक्षद्वारा अपहरणमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको सहयोग रहेको आरोप।
पाकिस्तानी कर्मचारीमाथि कुटपिट : एघारौँ सार्क सम्मेलन २२-२४ पुस ०५८ लागि पाकिस्तानबाट आएका एक सूचना अधिकृतमाथि कुटपिट। भारतीय सूचनाका आधारमा उनलाई काठमाडौँको सुकेधाराबाट पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता।
पाक कर्मचारी पक्राउ : भारतीय जाली नोटको कारोबारमा नेपालस्थित पाकिस्तानी दूताबासका विभिन्न कर्मचारीहरू भारतीय सूचनाका आधारमा पक्राउ परेका छन्। २० पुस ०५६ मा दूताबासका कर्मचारी बसिम सब्बुर पक्राउ परेपछि 'पर्सना नन ग्राटा'सहित फिर्ता गरिए। त्यसैको केही समयपछि सिराज अहमद सिराज पनि सोही आरोपमा उसैगरी फर्काइए। २९ चैतमा दूताबासका प्रथम सचिव मोहम्मद अलि चिमालाई १६ किलो घातक विस्फोटक पदार्थ आरडीएक्स भित्र्याएको आरोपमा पक्राउ र फिर्ता। पछि उनीमाथि आरोप मात्र थोपरिएको पुष्टि तर यही प्रकरणमा गुलाम हुसेन चिमा र माहिद्दिन सिद्दिकी पक्राउ।
धर्मगुरु पक्राउ काण्ड : भारतीय सूचनाका आधारमा सात जना मुसलमान धर्मगुरुहरू शाही शासनकै समय ०६१ मा लतितपुरको तिखेदेवलबाट पक्राउ र भारतीय पक्षद्वारा सुपुर्दगीको दबाब तर पछि मुक्त।
मिर्जा हत्याकाण्ड : छोटा राजनसँगको शत्रुता बढ्दै जाँदा सांसद मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या भएको थियो। सरकारी रपिोर्टका अनुसार राजन समूहका बब्लु श्रीवास्तव, ओपी सिंहले मिर्जाको हत्याका लागि सफिक मोहम्मदलाई पैसा दिएर नेपाल पठाएका थिए। बब्लु श्रीवास्तवको भरपर्दो सहयोगी बिक्की भन्ने विक्रम बाहीको कृष्णनगर सीमा क्षेत्रमा बीभत्स हत्या भएपछि त्यसको आरोप मिर्जामाथि गरिएको थियो।
कमल सिंहको हत्या : सुरुमा छोटा राजन समूहसँग आबद्ध भई ०५९ सालमा दाउद इब्राहिम समूहका शरद सेट्ठीको हत्यामा बाल ठाकरेसँगै संलग्न थिए, कमलसिंह नेपाली। पछि समूह परविर्तन गरी दाउदसँग लागेर बाल ठाकरेको हत्या गरेको आरोपमा यिनले मलेसियामा सजायसमेत भोगे। दाउदसँग लागेपछि आक्रोशित राजन समूहले २४ भदौ ०६३ मा बेलुका बानेश्वरमा उनको हत्या गर्‍यो।
सौकत बेगको हत्या : १० पुस ०६६ मा बुटवल-४ मैना बगरमा परवेज टान्डा भन्ने सौकत अलि बेगको भारतीय नम्बरप्लेटको मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले गोली हानेर हत्या। त्यस हत्यामा संलग्न मोहमद बकार सहिद रहेको भनी मृतककी श्रीमतीसमेतले लाइसेन्समा रहेको आरोपीको फोटो हेरी सनाखत गरििदएकी थिइन्। पछि यिनै बकारले जमिम शाहलाई गोली हानी हत्या गरेको प्रहरी भनाइ छ।
मनिहार हत्या : १९ असोज ०६६ मा नेपालगन्जको लालीगुराँस होटलको कोठामा स्थानीय अब्दुल मजिद मनिहारको हत्या भयो। मनिहारले भारतीय नक्कली नोटको कारोबार गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो।
जमिम शाहको हत्या : सञ्चार उद्यमी जमीम शाहको २४ माघ ०६६ मा काठमाडौँको लाजिम्पाटमा हत्या। प्रहरीका डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी तथा पूर्वन्यायाधीश गोविन्द उपाध्यायको छानबिन आयोगद्वारा भारतीय आपराधिक समूहबाट हत्या भएको ठहर। भारतीय अपराधीहरूले उनलाई भारतविरोधीको संज्ञा दिँदै आएको उल्लेख।
युनुस अन्सारीमाथि आक्रमण : नक्कली भारतीय रुपियाँ कारोबार अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका युनुस अन्सारीलाई छोटा राजन र बब्लु श्रीवास्तव समूहका मनमित सिंहद्वारा २६ फागुन ०६७ मा जेलमै गोली प्रहार। तर, घाइते मात्र भई बाँच्न सफल।